Features | Radio Himilo | Page 3
radio himilo December 12, 2017	Features, Wararka Leave a comment 46 Views
Muqdish0 – Wiilasha Muslimiinta ah ee ku nool Milindi kuwaas oo aan heli karin adduun ay ku guursadaan waxay hadda fursad u helayaan inay aqal-galaan. Mahad waxay uga celinayaan urur sama-fal ah oo arrintaas u istaagay. “Dhalinyaro badan ayaa doonayay ...
Dib-u-raaca Taariikhda Nololeedka Ali Abdalla Saalax – Hoggaamiyihii Halganka dheeraa.
radio himilo December 6, 2017	Features, MAQAALO, Wararka Leave a comment 38 Views
Muqdisho – Madaxweyne Cali Cabdalla Saalax oo Isniintii ay soo af-jarantay noloshiisa adduunyo, waxa uu ahaa 75 jir 21 Marso 1942 ku dhashay tuulada Baytul Al-ahmar oo hoos timaada deegaanka Sanxaan ee Gobolka Sancaa. Waxa uu ka dhashay qoys sabool ...
radio himilo December 6, 2017	Features, Wararka Leave a comment 33 Views
Muqdisho – Maalinta Caalamiga ee Nabadda waxaa sanadle loo qabtaa 21-ka bisha September si loo garowsado dadaallada shaqsiyaadka, ururrada iyo dowladaha ay ku dhameynayaan colaadaha kuna soo dabaalayaan nabadda. Shibirta ayaa u ah astaan lala xiriiriyo Maalinta Caalamiga ee Nabadda. ...
radio himilo December 5, 2017	Features, Wararka Leave a comment 42 Views
Muqdisho – Ugaarsade ayaa dhaawac waxaa kasoo gaaray toogasho aan loo meel dayin oo ey u geystay, marka loo eego booliska Lowa. Waaxda Ilaha Dabiiciga ee Lowa ayaa sheegay in saraakiisha goobta ay ka war-caliyeen kadib kolkii dhaawac uu ka ...
Nin dhintay kadib markii Bambo uu isku sawirayay ay ku qaraxday!
radio himilo December 5, 2017	Features, Wararka Leave a comment 88 Views
Muqdisho – Nin jeclaa inuu sawir selfie ah isaga oo gacanta ku heysta bamboo ayaa dhintay markii uu ku qarxay wajigiisa, marka loo eego booliska Ruushka. Booliska Labinsk ayaa sheegay in 26-jir lagu magacaabo Alexander Sasha Chechik uu u dhintay ...
radio himilo December 5, 2017	Features, Wararka Leave a comment 43 Views
radio himilo December 4, 2017	Features, Wararka Leave a comment 57 Views
radio himilo December 4, 2017	Features, Wararka Leave a comment 47 Views
radio himilo December 3, 2017	Features, Wararka Leave a comment 44 Views
Muqdisho – Xuska sanadlaha ah ee Maalinta Caalamiga ee Naafada waxaa sanadkii 1992-kii asteysay QM. Ujeedku waa ilaalinta xuquuqda iyo bad-qabsanaanta dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay ee ku jira dhammaan bulshooyinka iyo in sare loo dhigo wacyiga la xiriira xaaladaha ...
radio himilo December 2, 2017	Features, Wararka Leave a comment 78 Views